မဂ္ဂနီစီယမ် Taurate (334824-43-0) ထုတ်လုပ်သူပေးသွင်းစက်ရုံ
Beta-Arbutin ကို Ericaceae နှင့် Saxifragaceae တို့၏မိသားစုများမှအမြင့်တွင်တွေ့ရှိရသည်။ တကယ်ပါပဲ, ………။
မဂ္ဂနီစီယမ် Taurate (334824-43-0) ဗီဒီယို
မဂ္ဂနီစီယမ် Taurate (334824-43-0) အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
ထုတ်ကုန်အမည် မဂ္ဂနီစီယမ် Taurate
ဓာတုအမည် UNII-RCM1N3D968; RCM1N3D968; SCHEMBL187693; Ethanesulfonic acid, 2-amino-, မဂ္ဂနီဆီယမ်ဆား (၂း၁) ။ YZURQOBSFRVSEB-UHFFFAOYSA-L;
CAS အရေအတွက် 334824-43-0
အပြုံး C (CS (= O) (= O) [O -]) NC (CS (= O) (= O) [O -]) N. [Mg + 2]
မော်လီကျူးအလေးချိန် 272.6 g / mol
အရည်ပျော်မှတ် 300 °ခန့်
Sသိုလှောင်အပူချိန် N / A
လြှောကျလှာ ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ; ဆေးဝါး; ကျန်းမာရေး၊ အလှကုန်ပစ္စည်း
ဘာဖြစ်သလဲ မဂ္ဂနီစီယမ် Taurate?
မဂ္ဂနီစီယမ်သည်လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းစတုတ္ထအပေါများဆုံးနှင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဓာတ်သတ္တုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ သွေးပေါင်ချိန်ညှိခြင်း၊ အာရုံကြောဆိုင်ရာအချက်ပြခြင်းနှင့်ကြွက်သားကျုံ့ခြင်းတို့အပါအ ၀ င်လူ့ကျန်းမာရေးအတွက်အရေးပါသောဇီဝဖြစ်စဉ်ဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများတွင်ပါ ၀ င်သည်။ ပုံမှန်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာ၊ ကြွက်သား၊ အာရုံကြော၊ အရိုးနှင့်ဆယ်လူလာလုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုထိန်းသိမ်းပါ။ ထို့အပြင် taurine သည် ဦး နှောက်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အရေးပါသောအမိုင်နိုအက်ဆစ်ဖြစ်သည်။ ဤအရာဝတ္ထုနှစ်ခုလုံးသည်ဆဲလ်အမြှေးပါးကိုတည်ငြိမ်စေပြီးသက်သာစေနိုင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပြီးဗဟိုအာရုံကြောစနစ်တစ်လျှောက်တွင်အာရုံကြောဆဲလ်များ၏စိတ်လှုပ်ရှားလွယ်မှုကိုတားဆီးသည်။ ထို့ကြောင့်ဤအရာ ၀ တ္ထုနှစ်ခုကိုပေါင်းစပ်။ အပြည့်အဝဓါတ်ပြုပြီးသောအခါမဂ္ဂနီစီယမ် taurine သည်ရှုပ်ထွေးသောအသစ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်သည်။ ဤရှုပ်ထွေးမှုအသစ်သည်မဂ္ဂနီစီယမ်နှင့် taurine တို့၏အားသာချက်များကိုအကောင်းဆုံးပေါင်းစပ်ထားပြီး၎င်းသည်သိပ္ပံနည်းကျလုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါကဲ့သို့သောရောဂါများကိုကာကွယ်ရန်ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများကိုရရှိစေသည်။
လူအချို့ကမဂ္ဂနီစီယမ်တာရင်သည်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာစနစ်တွင်အကောင်းဆုံးသောမဂ္ဂနီစီယမ်ဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် taurine သည်နှလုံးကြွက်သားကိုကျုံ့စေသည့်အင်ဇိုင်းများကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် myocardial hypertrophy နှင့် calcium overload ကိုကန့်သတ်ခြင်းဖြင့် arhythmi များကိုကာကွယ်နိုင်ပြီးနှလုံးကိုလည်းကာကွယ်နိုင်သည်။ နှလုံးသည်အမြှေးပါးတည်ငြိမ်မှုနှင့်အောက်စီဂျင်အခမဲ့ radical scavenger ကဲ့သို့သောဂုဏ်သတ္တိများမှတဆင့်၎င်း၏ reperfusion ကြောင့်ဖြစ်ရခြင်း။
မဂ္ဂနီစီယမ်တာရာရိတ်သည်အာဟာရဓာတ်ဖြည့်စွက်မှုအတွက်အလားအလာကောင်းများရှိသည်။ ထို့ကြောင့်မဂ္ဂနီစီယမ်တာရိန်းသည်မဂ္ဂနီဆီယမ်ဖြည့်စွက်ဆေးများနှင့်နှလုံးကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဖြည့်စွက်ချက်နှစ်မျိုးလုံးအားရှာဖွေရန်အတွက်ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်ကျန်းမာရေးအခြေအနေများစွာတိုးတက်ကောင်းမွန်စေနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဘယ်လိုယူ မဂ္ဂနီစီယမ် Taurate?
Magnesium Taurate ကိုအဓိကအားဖြင့်ဆေးတောင့်နှင့်အမှုန့်များဖြင့်ရောင်းချသည်။ မဂ္ဂနီစီယမ် Taurate ကိုသောက်ရန်လိုအပ်သူများအတွက်အကောင်းဆုံးအကြံပြုထားသောနေ့စဉ်ဆေးပမာဏမှာ ၁၅၀၀ မီလီဂရမ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုသုံးပိုင်းခွဲခြားနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်၏မဂ္ဂနီစီယမ်သည်အလွန်နိမ့်သည်ဟုသင်ထင်ပါကမဂ္ဂနီစီယမ် taurate ဆေးပမာဏကိုသင့်လျော်စွာတိုးမြှင့်နိုင်သည်။ သို့သော်အန္တရာယ်ကင်းသောဆေးပမာဏထက်မကအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
၏အကျိုးကျေးဇူးများ မဂ္ဂနီစီယမ် Taurate
· မဂ္ဂနီစီယမ် taurine သည်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါကာကွယ်ခြင်းအတွက်အထူးအကျိုးရှိသည်။
· မဂ္ဂနီစီယမ် taurine သည်ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ခြင်းကိုကာကွယ်ရန်လည်းကူညီနိုင်သည်။
· မဂ္ဂနီစီယမ် taurine သည်ယေဘူယျအားဖြင့်သိမှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုနှင့်မှတ်ဥာဏ်ကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်။
· မဂ္ဂနီစီယမ်နှင့် taurine တို့သည်အင်ဆူလင်ကိုထိခိုက်လွယ်စေပြီးဆီးချိုရောဂါ၏ microvascular နှင့် macrovascular သက်ရောက်မှုများ၏အန္တရာယ်ကိုအနည်းဆုံးဖြစ်စေနိုင်သည်။
· မဂ္ဂနီစီယမ်နှင့် taurine နှစ်မျိုးလုံးသည်သက်သာစေသောဆေးနှင့်အာရုံကြောဆဲလ်တစ်လျှောက်ရှိအာရုံကြောဆဲလ်များ၏စိတ်လှုပ်ရှားလွယ်မှုကိုတားဆီးသည်။
· မာဂနီစီယမ် taurine ကိုတောင့်တင်းခြင်း / ချောင်းဆိုးခြင်း၊ amyotrophic lateral sclerosis နှင့် fibromyalgia စသည့်ရောဂါလက္ခဏာများသက်သာစေရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။
· မဂ္ဂနီစီယမ် taurine သည်အိပ်မပျော်ခြင်းနှင့်အထွေထွေစိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုတိုးတက်စေသည်
မဂ္ဂနီစီယမ် Taurate ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ
မဂ္ဂနီစီယမ် taurine နှင့်အတူဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနည်းပါးပါသည်။ လက်ရှိလူသိများသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာအိပ်ငိုက်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့်ဝမ်းလျှောခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်မဂ္ဂနီဆီယမ် taurine ကိုသောက်ပြီးနောက်အိပ်ငိုက်မည်ကိုကြောက်လျှင်အိပ်ရာမဝင်မီည၌၎င်းကိုသောက်ရန်အကြံပြုပါသည်။ မဂ္ဂနီစီယမ် taurine မသောက်မီသင့်ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။
Agarwal R, Iezhitsa I, Awaludin NA, Ahmad Fisol NF, Bakar NS, Agarwal P, Abdul Rahman TH, Spasov A, Ozerov A, Mohamed Ahmed Salama က MS, Mohd Ismail N. ဂလိုကျစီတကျ၏မဂ္ဂနီစီယ Taurate ၏စတင်ခြင်းနှင့်တိုးတက်မှုအပေါ် သွေးဆောင်စမ်းသပ်မျက်စိအတွင်းတိမ်: Vivo နှင့်စသည်တို့အကဲဖြတ်အတွက်။ Exp Eye Res ။ 2013 ခုနှစ်မေလ; 110: 35-43 ။ Doi: 10.1016 / j.exer.2013.02.011 ။ Epub 2013 ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ 18 PMID: 23428743 ။
Shao A, Hathcock JN (2008) ။ "အမိုင်နိုအက်ဆစ် taurine, L-glutamine နှင့် L-arginine များအတွက်အန္တရာယ်အကဲဖြတ်" စည်းမျဉ်းဝိသဗေဒနှင့်ဆေးဝါးဗေဒ။ 50 (3): 376-99 ။ Doi: 10.1016 / j.yrtph.2008.01.004 ။ PMID 18325648. Observed Safe Level (OSL) သို့မဟုတ်အမြင့်ဆုံး Observed စားသုံးမှု (HOI) အဖြစ်ဖော်ပြသည့်နည်းအသစ်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ OSL ၏အန္တရာယ်အကဲဖြတ်ချက်များအရရရှိနိုင်သောထုတ်ဝေထားသောလူ့လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုအချက်အလက်များအပေါ် အခြေခံ၍ ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများမရှိခြင်းအတွက် Tau သည်ဖြည့်စွက်ပမာဏ3g /dအထိ၊ Gln သည် 14 g /dအထိစားသုံးမှုနှင့် Arg at သည်ပြင်းထန်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ 20 g /dအထိစားသုံးလျှင်၊ ဤအဆင့်များကိုသာမန်ကျန်းမာသောလူကြီးများအတွက်သက်ဆိုင်ရာ OSL များဟုသတ်မှတ်သည်။